Voafonja Roa Tsaroan’ireo Blaogera Etiopiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Jona 2018 7:10 GMT
Nipoitra avy amin'ny tontolombolongana Etiopiana ny fanomezam-boninahitra ho an'ireo lehilahy roa voafonja tao anatin'ny tapabolana farany.
ET Wonqette avy amin'ny blaogy Weichegud ET Politics no tonga niaraka tamina sary iray mampahonena mikasika an'i Ato G [Ato = Andriamatoa], lahiantitra iray niasa tao aminy sy vondrona mpinamana iray mba hijery ny fikambanana kely iray mpanao asa soa tao Etiopia. Nanaiky i Ato G ny handefa tsy tapaka ny fanavaozam-baovao ho an'ireo mpamatsy vola momba ny fivoaran'ny fikambanana:
Isaky ny telo volana na mihoatra, mahazo taratasy avy amin'i Ato G izahay, lahiantitra Etiopiana iray izay monina kilometatra an-jatony vitsivitsy miala an'i Addis Abeba [renivohitr'i Etiopia]. Nanjary lasa fisehoan-javatra ireo taratasin'i Ato G. Dodona be izahay mampitampita azy ireny.
Marefo mora miparasaka ny soratanan'i Ato G ary sokiriny tsy misy antra ao anaty ravin-taratasy malefaka sy mikitaontaona. Ranomainty mitovy loko hatrany no ampiasainy – volomparasy manopy manga – izay mamela vongan-dranomainty isaky ny avy manoratra ny litera “de” sy “m” izy.
Tena tsy misy haingokaingony ireo taratasiny. Tsy mampiasa ireo fiarahabana Etiopiana mpiangesongeso matetika anaovana sasinteny amina teny tsotra izy. (“Ke semai kokeb yebeza nafqote …”Adika malalaka hoe… “Mihoatra lavitra noho ny isan'ireo kintana eny amin'ny lanitra ny faniriako…”) Fa aleony, soratana aorian'ny fisaintsainana lalina ny teny tsirairay avy, tsy misy fandanindaniam-poana. Maka fotoana izy hitanisana ireo anarana rehetra, miaraka amin'ireo vehivavy rehetra notovanana ampanajana ny “Ramatoa” sy ireo lehilahy amina “Andriamatoa”. Tsy mila anaram-boninahitra misolelaka, tsy mipentina fandokandokafana tafahoatra na fehezanteny miravadravaka.
Kanefa avy eo… antsoiny hoe “Lijoche” (ry zanako) izahay. Ary ny fomba anoratany azy, Lijoche… misy zavatra mahasarika ahy foana.
Avy eo nitsahatra tsy tonga intsony ireo taratasiny. Taorian'ny fanadihadiana, fantatr'izy ireo ihany ny antony. Tonga tao aminy ireo mpiasam-panjakana teo an-toerana izay naheno resa-bola nikoriana tao anatin'ity fikambanana vaovao mpanao fiantrana ity ary nangataka tsolotra. Raha vao nandà izy, “nieritreritra ireo mpiasam-birao fa andro vitsivitsy ao am-ponja dia hampanjavona ilay lahy antitra”. Noho izany nohidian'izy ireo nandritra ny 16 andro izy.
Rehefa niantso an-telefonina an'i Ato G i ET Wonqette taorian'ny namotsorana azy, nampionona azy izy tamin'ny fitenenana hoe “”Mechase mn yderegal? Dehna qen eiskimeTa.’ (Inona no azonao atao? Mandra-pisian'ny mangiran-dratsy tsaratsara kokoa.’)” Tokony novakianao ny famadihana ho soratra feno tao anatin'ilay lahatsoratra 16 andro. Nofaranany hoe:
Izany no momba an'i Etiopia. Izay mandratra ny fonao mety mitondra amin'ny fanamboarana azy koa.
Tiako ho fantatry ny olona, hatraiza ny hatsaram-panahy ao Etiopia. Na dia amin'ny alalan'io trangam-pahoriana sy herisetra mahatsiravina raikin-tapisaka io aza, misy hatsaram-panahy izay mamaky ny fonao ho rotidrotika. Etiopia, adinontsika matetika, dia tena manatombo noho ny governemanta vonona hanempotra ny fanahin'ireo olona efa midaraboka.
Ary angamba miandry antsika ho tonga saina ny tontolo alohan'ny hiposahan'ireo andro tsara ho antsika. Saingy raha vao notiaviko izay nataon'i Ato G mihoatra noho ny fankahalako ireo olona izay nandroba azy nandritra ny 16 andro, haiko fa tonga aho.
Tena mambotry am-pilaminana, tsy manam-pitsaharana io. Ho avy ireo andro tsara satria misy maro ireo hafa izay manao koa ny “16 ho andron'izy ireo.”
Ethio-Zagol avy amin'ny ethiopian life, politics, culture and arts, blaogy miresaka fiainana, politika, kolontsaina ary zavakanto Etiopiàna, no nanoratra mikasika ny lehilahy Etiopiana zokinjokiny iray hafa – olona iray izay efa mbola any am-ponja.
Manoratra momba ny profesora Mesfin Woldemariam izy, endrika iray misongadina eo amin'ny fiainana ara-politika sy kolontsaina Etiopiana, izay nanangana ny Filankevitra Etiopiana momba ny Zon'olombelona, ary vao haingana, ny mpanohitra Rainbow Ethiopia: Hetsika ho an'ny Demokrasia sy ny Rariny Sosialy. Tamin'ny faramparan'ny taona lasa, taorian'ny fipoahan'ireo herisetra taorian'ny fifidianana nasionaly nampiady hevitra, nogadraina niaraka tamin'ireo endrika fantadaza avy amin'ny antoko mpanohitra hafa izy noho ny andiana fiampangana maro, anisan'izany ny famadihana.
Mamintina ireo fihetsehampony momba ny lohatenin'ilay lahatsoratra i Ethio-Zagol – Ho an'i Mesfin Woldemariam: ilay hany etiopiana akademika sy manampahaizana tena manan-danja tamin'ny andronay. Notohizany tamin'ny fahatsiarovana ireo andro nahasambatra, fony ilay Profesora nitàna ny fitsaràna tao Addis Abeb tao anatina trano fisotroana kafe tsara indrindra Tomoka:
Manana fahatsapàna hafahafa toy ny trano fisotroana kafe tany Viennes tamin'ny taonjato faha-19 izany ny ny Tomoka. Mitovy amina sehatra iray natao ho an'ny hevitra ireo latabany fa tsy ho an'ny kafe irery ihany. Eo ireo tanora mamiratra miaraka amin'ireo talenta matotra alohan'ny fotoana ho an'ny fieritreretana analitika sy ny tsoakevitra no mifampikatroka amin'ny filozofia, ny politika ary ny toekarena.
Fahazaran'ny Profesora Mesfin Woldemariam ny nanao dia an-tongotra vao maraimbe nankao amin'ny Tomoka izay nitangoronan'ireo tanora lalintsaina sy feno fahavononana tanteraka hihoitra, tanora izay tsy mbola teraka akory fony nivoaka ireo bokiny mikasika ny mosary sy ny fiarovana ara-tsakafo, ary niady hevitra mikasika ny zava-mitranga erantany, avy amin'ny maodernisma taty aoriana sy ny Derrida mankamin'ny ‘Tomism’. Homo sum no toetsain'i Tomoka: tsy misy ahy ny maha-olombelona. Tsy misy adihevitra, nefa, tsy misy fanondroana Etiopiana.
Sahala amin'i ET Wonqette talohany, taminà naoty iray misy lafiny tsara no namaranan'i Ethio-Zagol azy:
Ho tsapa ny fiantraikan'ireo mpitsipaka goavana rehefa mitety vanim-potoana ary mahatratra ireo andian-taranaka manaraka ireo hevitra avy amin'dry zareo. Nanavotra an'ireo fitsipiky ny tolona tsy atao an-kerisetra ny Profesora Mesfin, ary ny ny fiarovana ireo zon'ny tsirairay tsy ho faty ao Etiopia, miaraka amina fahafoizantena tsotra sy maharitra ary fàka tàhaka. Raisin'ireo tanora ao Tomoka sy any an-toerana hafa ho fironana gaovana io. Miaina lavitra ambadiky ny famonjàna sy ny fahafatesan'ny tompony ny hevitra.